Home Wararka Biyaha qasaceysan “Mooya-Saxo” lagu iibiyo Soomaaliya oo khatar ku ah caafimaadka
Biyaha qasaceysan “Mooya-Saxo” lagu iibiyo Soomaaliya oo khatar ku ah caafimaadka
Biyaha qasaceysan ee Soomaalida u taqaan “Mooya-Saxo” ee lagu iibiyo guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan degaanada Somaaliland ayaa la ogaaday in ay khatar ku yihiin caafimaadka qofka. Baaritaan lagu sameeyay laabka biyaha ee Wakaalada Biyaha ee Hargaysa, ayaa lagu ogaaday in biyaha loo yaqaano “Mooya-saxada” ee lagu sifeeyo gudaha Somaliland anay u dhamaystirnayn macdanihii loo baahnaa, isla markaana ay ku jiraan noola yaasha ili ma qabatada ah sida bakteeriyada.
Kadib markii la ogaaday in biyaha lagu sifeeyo gudaha Somaliland ay khatar ku yihiin caafimaadka bulshada, isla markaana anay gaadhsiisnayn heerkii looga baahnaa, ayaa wakaalada biyaha, oo kaashanaysa wasaarada caafiimadka ay iskugu yeertay dhamaan madaxda shirkadaha biyaha soo saara.
Kulanka oo ay kasoo qayb galeen saraakiil caafimaad, saynis yahano iyo khuburo kale, ayaa lagu sheegay in la doonayo in dib u sixid lagu sameeyo habka loo sifeeyo biyaha ay soo saaraan shirkadaha waddaniga ah.
“Biyaha mooyo-sexooyinku waa biyo ku jira heer kii lacabi kari lahaa, lakin u jeedadu waxa weeyaan macdanaha biyaha ku jira ee markii la baadhay la ogaaday in ay ku yaryihiin, ama wax yaabaha kale ee kasoo baxay sida bakteriyada in layskaga yimaado oo la wada saxo” sida waxa yidhi Mareeyaya Wakaalada Biyaha Hargaysa Maxammed Cali Daarood.
Ma aha kaliya in shacabka Somaliland ay shaki badan ka qabaaan tayada biyaha lagu sifeeyo gudaha Somaliland, laakiin waxaa iyadana walwal noocaasi ah ka jiraa dalka Soomaaliya. Ma jirto hay’ad ama dowlad isku mashquulisay in ay hubiyaan ama dabagalaan tayada biyaha lagu iibiyo dalka Soomaaliya.
[Sawiro] Xaaladda Guriceel oo kasii dartay & ciidan gudaha u galay Magaalada